၁၃၇၅ ခုနှစ်မန္တလေး သင်္ကြန်စာ (၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလ မှ စတင်သည်) ~ အနုပညာအိမ်လေး
၁၃၇၅ ခုနှစ်မန္တလေး သင်္ကြန်စာ (၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလ မှ စတင်သည်)
ဒီနှစ်ရဲ့သင်္ကြန်စာကတော့ အလွန့်အလွန် အလွန်တရာမှထူးခြားလှပါပေတယ်။
အရင်သင်္ကြန်စာတွေမှာ မဖတ်ဖူး၊ မကြားဖူးတာတွေထည့်သွင်းဟောပြောထားတဲ့အတွက် ဗဟုသုတလည်း ရပါတယ်။ ရီလည်းရီရပါတယ်။ အံ့လည်းအံ့ရပါတယ်။
၁၃၇၅ ခုနှစ်မန္တလေးသင်္ကြန်စာထဲက ကောက်နှုတ်ချက်များကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
တန်ခူးလ - အနောက်အရပ်ဒေသတွင် အုတ်အုတ်သဲသဲဆူညံခြင်း၊ အခြေအတင်အငြင်းပွား ခြင်းဖြစ်ပေါ် လိမ့် မည်။ အရာရှိများ၏ ဂုဏ်သိက္ခာများညိုးနွမ်းလိမ့်မည်။ အမျိုးသားဘဏ္ဍာငွေကို နည်းလမ်းအမျိုးမျိုး
ကဆုန်လ - စည်ပင်သာယာအခွန်အကောက်များ တိုးတက်ကောင်းမွန်လိမ့်မည်။ အုပ်ချုပ်သူ အချင်းချင်း အခြေအတင်အငြင်းပွားရမည်။ အမျိုးသမီးများအပေါ် ကျုးလွန်သောရာဇ၀တ်မှု များပြားလိမ့်မည်။ အလှအပ ဆိုင်ရာဈေးနှုန်းများ ကမောက်ကမဖြစ်တတ်သည်။
နယုန်လ - ပါလီမန်လုပ်ငန်းများရှုပ်ထွေးများပြား၍ တက်ကြွလိမ့်မည်။ စာမူခများတိုးတက်ပေးရမည်။ ပြည်သူ့ ၀န်ထမ်းများဂုဏ်သိက္ခာညိုးနွမ်းကျဆင်းရတတ်သည်။ အဆင့်မြင့်နေရာဌာနများတွင်ရှုပ်တော်ပုံ များပေါ်ပေါက်လိမ့်မည်။
၀ါဆိုလ - လွှတ်တော်အတွင်းအခြေအနေကောင်းမွန်နေလိမ့်မည်။ ကြည်းတပ်ရေတပ်နှင့်ပတ်သက်၍ အင်အားတိုးတက်လာလိမ့်မည်။ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ပိုင်ခွင့်များကို စူးစမ်းမေးမြန်းခံရမည်။ အများပြည်သူပိုင်အဆောက်အဦများ ပျက်စီးမှုများ တတ်သည်။
၀ါခေါင်လ - ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များနာမကျန်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ငြင်းခုန်ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားလိမ့်မည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ပြည်သူများကျေနပ်အားရလောက်သော ဥပဒေများပြဌာန်းလိမ့်မည်။
ပညာရှိတို့ သည် အသိဥာဏ်ဖောက်စားခံရတတ်သည်။ အရက်မျိုးစုံဈေးတက်လိမ့်မည်။
တော်သလင်းလ - အချို့အရပ်ဒေသတွင် ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုများ၊ ဆန္ဒပြမှုများဖြစ်ပေါ်လိမ့်မည်။ အထက်တန်းလွှာအသိုင်းအ၀ိုင်းတွင် နာမကျန်းမှုများ၊ သေဆုံးမှုများဖြစ်ပွားတတ်သည်။ အတွေးအခေါ်ပညာရှင်များ ကျန်းမာရေးညံ့ဖျင်းတတ်သည်။ ၀န်ကြီးအဖွဲ့အပြောင်း အလဲဖြစ် ပေါ်မည်။
သီတင်းကျွတ်လ - ပင်လယ်ကမ်းနားပိုင်းတွင် မုန်တိုင်းဖြစ်ပေါ်မည်။ တပ်မတော်အတွက်ကောင်းမွန်သောကာလဖြစ်သည်။ ထင်ရှားကျော်ကြားသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဂုဏ်သိက္ခာ ကျဆင်းတတ်သည်။ စာပေလောကတွင်ရှုပ်ထွေးသောပြဿနာများ ပေါ်ပေါက်တတ်သည်။ အလုပ်လက်မဲ့ပေါများတတ်သည်။ အာဏာရှိသူများကြား သဘောထားကွဲလွဲမှုများကြုံတွေ့ရမည်။
တန်ဆောင်မုန်းလ - တည်းခိုခန်းလုပ်ငန်းများအေးနေလိမ့်မည်။ အချင်းချင်းတရားစွဲဆိုမှုများပြားမည်။ စတော့ရှယ်ယာလုပ်ငန်းများရောင်းဝယ်မှုစတင်လိမ့်မည်။ ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းများတိုးတက်ကောင်းမွန်လိမ့်မည်။
နတ်တော်လ - ကြည်းတပ်ရေတပ်တွင် ကောင်းမွန်သောအကျိုးတရားများရရှိမည်။ ပြည်သူများကောင်းကျိုးခံစားရမည်။ တရားသဖြင့်ဖြစ်ပေါ်လာသော အရာများအနိုင်ကျင့်ခံရ တတ်သည်။ နိုင်ငံတော်မှကြွေးမြီများပေးဆပ်နိုင်လိမ့်မည်။ သတင်းစာ၊ ဂျာနယ်ထုတ်ဝေသူများ ကျန်းမာရေးညံ့ဖျင်းတတ်သည်။
ပြာသိုလ - ပြည်သူအပေါင်း ရောင့်ရဲမှုမရှိဘဲဖြစ်နေတတ်သည်။ ပါလီမန်အဖွဲ့ဝင်များငြင်းခုံခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားတတ်သည်။ စနေဂြိုဟ်သည်အသွားမြန်နေသဖြင့် ဆင်းရဲသူများ ပိုမိုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တတ်သည်။
စပါးစိုက်ပျိုးမှုကိုနိုင်ငံတော်မှ အားပေးအားမြှောက်ပြုတတ်သည်။ လောင်းကစားနှင့်သုတေသနလုပ်ငန်းများကျဆင်းမည်။
တပို့တွဲလ - တရားဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သော ပုဂ္ဂိုလ်များသိက္ခာချခံရတတ်သည်။
တပေါင်းလ - သေရည်အရက်မျိုးစုံ ဈေးကောင်းလိမ့်မည်။ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဝေဖန်မှုများပြားလိမ့်မည်။ လောကီပညာရှင်ပေါများလာလိမ့်မည်။ ရာဇ၀တ်မှုများ တိုးတက်လာလိမ့်မည်။
(အထူးသဖြင့် ဤနှစ်တွင် ဘဏ္ဍာရေးနှင့် ပတ်သက်သော ရာဇ၀တ်မှုများ မှောင်ခို၊ လိမ်လည် အလွဲသုံးစား ပြုလုပ်မှုများကြုံတွေ့မည်။ မြေယာအခွန်များ တိုးတက်လာမည်)
ကဆုန်၊ တပို့တွဲ၊ သီတင်းကျွတ်၊ တန်ဆောင်မုန်း၊ ပြာသို ဤငါးလကား အပျက်အစီးများအံ့။ မီးလောင်ဖန်များအံ့။ ဇနပုဒ်တိုင်းကား ပုန်ကန်အံ့။ ခိုက်ရန်များအံ့။ အချင်းချင်းသတ်ကြလတ္တံ့။ မုဒိန်းကဏ္ဍထူပြောအံ့။
အောက်ဆုံးတွင်ရေးထားသောစာသား။ ““အမှားအယွင်းရှိက ပြင်ဆင်ဖတ်ရှုပါ””။
ပုဏ္ဏားတော်ပညာရှိဆရာကြီး ဦးစိန္တာ၏သား ပုဏ္ဏားတော်နက္ခတ်ဗေဒင်ပညာရှိ ဆရာကြီး ဦးလောကေသရနှင့် သား ဆရာလင်း၊ မြေး- ဆရာဦးအောင်သန်း- တို့ရေးသားစီရင်ပြုစုသည်)
မှတ်ချက်။ ။ တစ်စောင်သုံးရာကျပ်ဖြင့် ရန်ကုန်မြို့နေရာအနှံ့အော်ရောင်းနေပါပြီ။ ၀ယ်ယူဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။
REF: ဥက္ကာကိုကို (Senior Reporter at 7Day News Journal)
Posted by Admin-HWH
ပင်ကိုယ်မန္တလေး သင်္ကြန်စာ(၂၀၁၃)ပြည့်ပြည့်စုံစုံကိုတင်ပေးပါဗျာကျွန်တော်တို့မှာ မြန်မာင်္ကြန်စာနဲ့ဝေးနေရတာကြာလှပါပြီးဗျာ
အဝေးတစ်နေရာမှ သာဓုခေါ်သံ - နာရေးကူညီမှု အသင်း(ရန်ကုန...
ဥပသကာတစ်ယောက်ရဲ့ စိတ်ဓါတ် - နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကု...
ကြေးနီစီမံကိန်း ပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပါက ရင်းနှီးမြှ...
အချိန်မီ မပြီး၍ မြိတ် - မောတောင် လမ်းဖောက်လုပ်ခွင့...
အဓမ္မ နေအိမ်သိမ်းယူ ( ရုပ်သံ-သတင်း )
ရွာသား ၅ ဦး သေနတ်ပြစ်ခံရ ( ရုပ်သံ-သတင်း )
အနမတဂ္ဂ စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ ( ရုပ်သံ-သတင်း )
သေနတ်ပစ်ခတ်ခံရသူ ရှားခဲရွာသား ၂ဦး ရန်ကုန်သို့ရောက်...
လယ်ယာမြေနှင့် ပတ်သက်သည့် ဥပဒေရေးရာ သင်တန်းဆင်းပွဲ
ကဗျာဆရာ ငြိဏ်းဝေ၏ “အနမတဂ္ဂ” စာအုပ် မိတ်ဆက်ပွဲ
အာဆီယံ ဆက်သွယ်ရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက် နည်းပညာ အရာရ...
ကုမ္ပဏီ တစ်ခုကြောင့် မိုးကုတ်ကျောက်တွင်းရှိ တစ်နို...
ဆေးအလွန်အကျွံ သုံးစွဲ၍ မွေးမြူရေးကြက်ဥများ အရည်အသေ...
နွေရာသီ ရန်ကုန် မီးမပျက်ရန် ဂျပန်ကူမည်
ပြည့်တန်ဆာ လုပ်ငန်းများ တရားဝင် လုပ်ကိုင်ခွင့် ရရန...
တက္ကသိုလ်ဆရာ၊ ဆရာမများအသင်း တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရ...
မြန်မာနိုင်ငံ ရင်ဆိုင်နေရသောစိန်ခေါ်မှုများ ဖြေရှင်း...
၅ ကျပ်၊ ၁၀ ကျပ်၊ ၂၀ ကျပ်တန် ငွေစက္ကူများ ပြန်ရုပ်သိ...
ယနေ့ည တိုက်ရိုက် ကြည့်ရှုနှိုင်မည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစ...
အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်း ရရှိနိုင်သည့် အခြေခံစာနယ်ဇ...
ရခိုင်ပြည်နယ် စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့ ည ၇း၄၅ အချိန်တွင...
စစ်တွေတွင် ရခိုင် ကလေး ရိုက်နှက်ခံရမှု မဟုတ်ဟု အစို...
စစ်တွေရဲ့ ယနေ့ ဂယက် မောင်တောမြို့ထိ ရိုက်ခတ်
ဗိုလ်ချုပ် ကြေးရုပ် ထားရှိရန် နိုင်ငံတော် အစိုးရသိ...
ဒီချုပ်က ကချင်ပြည်နယ်တွင် ရပ်/ကျေးညီလာခံကျင်းပရန် ...
ယနေ့ (စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်) မွန်းလွဲပိုင်း စစ်တွေ့မြို...
ယနေ့ ညနေ (၄နာရီ ၂၃မိနစ်)အထိရရှိသော ရခိုင်ပြည်နယ်ေ...
NLD (၂၄)နှစ်ပြည့်နှင့် ရွှေဝါရောင် (၅)နှစ်ပြည့် စာေ...
ကျုံပျော်မြို့နယ် ရှားခဲရွာနေ ဒေသခံတစ်ဦးအား ၀ိုင်း...
မိမိသည် ဒီမိုကရေစီပြယုဂ် `Icon´တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းေ...
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်အေးက စက်...
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော် ဒုတိယနေ့ အစည်းအဝေး ဆ...
ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ကု...
ပြည်သူ့ အကျိုးပြုရုပ်သံလွှင့် လုပ်ငန်းဆွေးနွေးပွဲ (...
ABSDF (မြောက်ပိုင်း) ကျောင်းသား ၄ ဦးကို ပါဂျောင်ေ...
ကြွေးဟောင်းများဆပ်ရန် မြန်မာကို အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း...
နိုင်ငံတော်သမ္မ တဦးသိန်းစိန် သည် အမေရိကန်နိုင်ငံ၊န...
အမေရိကရောက် မြန်မာများ ညီညွတ်ကြရန်နှင့် ပြန်လာချင...
စစ်တွတွင် တပ်မတော်သားတစ်ဦးက ဘင်္ဂါလီအမျိုးသားတစ်ဦး...
ပထမ အကြိမ် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော် စတုတ္ထပုံမှ...
ညီနေမင်း ( နည်းပညာ ) ၏ နည်းပညာဖြန့်ဖြူးရေး ခရီးစဉ်...
ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားစီရင်ရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်း...
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းသည် နိုင်ငံတော်အဆင...
ထိုင်းနိုင်ငံသို့ နေ့စဉ် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ကုဗပေသန်း ၁၀...
နိုင်ငံပေါင်း ၁၁၆ နိုင်ငံမှ ခေါင်းဆောင်များတက်ရောက...
မြိတ်မြို့ ငါးလေလံဈေးမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ကုမ္ပဏ...
ဦးဌေးဦး က ခြိမ်းခြောက် ပြောဆိုခြင်းမရှိဟု ဆို
ဂျိမ်းစ်ဘွန်း မင်းသားကြီး ရော်ဂျာမိုး မြန်မာနိုင်င...
အိုဘားမား ၏ ကုလသမဂ္ဂ မိန့်ခွန်း၌ မြန်မာ၏ ငြိမ်းချမ်...
တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးကော်မတီ တာမွေ တရားရုံးသို့ သွာ...
ဦးနု ၏ တာတေ စနေသား စာအုပ်မိတ်ဆက်ပွဲ
တိုင်းရင်းသား သတင်းမီဒီယာများ ပြည်တွင်းဝင်ရန်ကြိုး...
စစ်တပ်က ဒေသခံကို လုပ်အားပေးခေါ်
အစိုးရတပ်နဲ့ KIA တိုက်ပွဲ အရပ်သားပြည်သူ ၃ ဦးပြင်းထ...
မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး ချွတ်ခြုံကျမှုသည် စီးပွားေ...
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားတွေရဲ့လှူဒါန်းမှုများ ( ရုပ်သ...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများအဖွဲ့မှ ခရီးစဉ်များ နှင့်...
ရွှေတွံတေးဆရာတော် ကျောင်းကုန်းမြို့နယ် ရေဘေးဒုက္ခသည်...
မီဒီယာ စကားဝိုင်း (Town Hall Meeting)
လူပေါင်း ၁၀၀၀ ခန့် တက်ရောက်သည့် ရသေ့တောင် ရခိုင်ဒေ...
ပြည်သူ့ရေးရာ ဝန်ဆောင်သော ထုတ်လွှင့်မှု လုပ်ငန်းများသ...
နိုင်ငံရေး ဘာသာရပ်များ သင်ကြားပေးတော့မည့် မန်းတက္ကသ...
လက်ပန်းတောင်းတောင်..ချင်းတွင်း.. ထိမ်းသိမ်းရေး နှီ...
ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ဥက္ကဌ ဦးတင်အေး ရန်...
ရန်ကုန်မြို့လယ်တွင် သောက်ရေ အခက်အခဲဖြစ်
ရွှေတွံတေးဆရာတော် ဝေါမြို့ သုခိတာရုံ ဘကကျောင်းသို့ ...
လူသားချင်း စာနာထောက်ထားရေးဆိုင်ရာ သတင်းစာရှင်းလင်း...
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက တိုင...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ၏ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကို ရိုဟင်ဂျာ အရေးဆန္ဒပြမှု မေးမြ...
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ကို ...
ဧရာဝတီမြစ်တွင် ကသာမြို့၌ စိုးရိမ်ရေမှတ်ရောက်ရှိနို...
နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဥ...
တော်လှန်ရေး ရဲဘော်ဟောင်း စာရေးဆရာ ဝမ်းအိုဝမ်း ကျော...
မီဒီယာဥပဒေ သည် သတင်းသမားများအား ထိန်းချုပ်ရန် မဖြစ...
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ...
ကမ္ဘာကျော် Orient Express ကုမ္ပဏီ ချင်းတွင်းမြစ် အပေ...
ဖရန့်ဖတ် - ရန်ကုန် ပထမဆုံး ဥရောပ လေကြောင်း ခရီးစဉ်...
အကျဉ်းသားဟောင်းများ အဖွဲ့ချုပ် ဖြစ်မြောက်ရေးကော်မတ...
ငြိမ်းချမ်းရေးဆန္ဒပြပွဲ ဦးဆောင်သူလေးဦး တရားစွဲခံရ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ခရီးစဉ်ေ...
နိုင်ငံတော်က ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားဆိုသည်မှာ မရှိေ...
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီအကူးအပြောင်းသည် မြန်မာ-တရ...
လွှတ်တော်တွင်း ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းကျမှု မျှော်မှန်းထာ...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့တွင် ငြိမ်းချမ်း...
တနိုင်ငံလုံး စစ်ပွဲတွေ ရပ် ( ရုပ်သံ-သတင်း )
ယုံကြည်ချက်ကြောင့် ပုသိမ် NLD အများစုပါတီမှ နှုတ်ထွ...
ပခုက္ကူမြို့ ငြိမ်းချမ်းရေး ဆုတောင်းပွဲကို ဧရာဝတီမြ...
မန်း အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့အထိမ်းအမှတ်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် ဘန်ကီမွန်းတို့ ကုလသမဂ္ဂရုံ...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ လှုပ်ရှားမှုတွင် ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဝါရှင်တန်ဒီစီမြို့မှာ ပြည်ပရောက...
ပဲခူးတိုင်း ဒေသခံလယ်သမားတွေ ရဲ့ အခက်အခဲ ဖြေရှင်းပေ...
ရခိုင် ဒေသလုံးဆိုင်ရာ လူထုအစည်းအဝေး ကန့်သတ်မှုတွေပြ...
စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရက် RFA ညပိုင်းအသံလွှင့်အစီအစဉ်
ကမ္ဘာ့ လက်နက်ကိုင်အားလုံး အဖြူရောင်ဆိုးကြ - ဦးကျော်...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် ငြိ...
ဒီကနေ့ ကျရောက်တဲ့ အကြိမ် (၃၀)မြောက် တကမ္ဘာလုံးဆိုင်...
၁၈ ကြိမ်မြောက် ဘီအန်အိုင် အစည်းအဝေး သတင်းထုတ်ပြန်
မဂျာဆိုင်းအိန် နှင့်တကွ စစ်ဘေးကြောင့် သေဆုံးသွားကြ...
တံတားဖြူရှိ အင်းယားကန်စောင်း မှာ ငြိမ်းချမ်းရေးအထိ...
ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ အထိမ်းအမှတ် လမ်းလျှောက် ဆန္ဒ...
ရသေ့တောင် လူထုအစည်းအဝေးအား အစိုးရကန့်သတ်မှုရှိသော်လ...
မြန်မာအပေါ် ဘဏ္ဍာရေးအကူအညီ ကန့်သတ်မှု ဖြေလျှော့ရေး အမေ...
ကျပ် ၅၀၀၀ တန် ငွေဖြည့်ကတ် ရပြီ
စက်တင်ဘာလ (၂၁) ရက်နေ့ RFA မနက်ပိုင်း အသံလွှင့်အစီအစ...
စက်တင်ဘာ ၂၁ ရက် ညနေ ၄ နာရီတွင် ရန်ကုန်မြို့ရှိ ခရစ...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့က ဝါရှ...
ကချင်ငြိမ်းချမ်းရေးကွန်ရက်မှ သမ္မတရုံး၊ လွှတ်တော်ရုံ...
အပြည်ပြည်ဆိုင် ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ လှုပ်ရှားမှု
2012 ခုနှစ် စက်တက်ဘာလ ၂၀ ရက် ကြာသပတေးနေ့ RFA - TV ...
ဦးရွှေထူး တောင်ကြီး အကျဉ်းထောင်က လွတ်လာပြီ ( ရုပ်သံ...
ဧရာဝတီတိုင်း က ရေဘေးသင့် ပြည်သူတွေအရေး နဲ့ ပတ်သက်ြ...
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာခရိုင်၊ လက်ပန်တောင်းတောင်ေ...
ပည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ကံကြီးကုန်းကျေးရွာနှင့် ဇီးအ...
ခရီးဆုံးထိ မရောက်လိုက်သည့် မန်းက တစ်ကိုယ်တော် ပါဖေ...
ဇေကမ္ဘာကုမ္ပဏီ၏ တရားစွဲဆိုမှုအား အောက်တိုဘာလ(၄)ရက်နေ့...
ပြည်လုံးကျွတ်လူဦးရေ သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရာတွင် ...
စက်တင်ဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က မီးလောင်မှု ဖြစ်ပွားစေရန် တမင်...
အစိုးရကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံ ခဲ့မှုအပေါ် မယ်ေ...
ကိုမိုးသီးဇွန် နှင့် အဖွဲ့ ဦးဝီရသူနှင့် တွေ့ဆုံ ( ...
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ရပ်/ကျေး ညီလာခံ ကြေည...
ရွှေတွံတေး ဆရာတော် ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ၅ နှစ်ပြည့...
ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့ ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ဖို့လိုဟု KI...
အင်းလေးတွင် သွားဘက်ဆိုင်ရာ အခမဲ့ ကုသမှုပြုလုပ်
ကိုလဖိုင်ဇော်ဆိုင်း နဲ့ မေးမြန်းချက် ( အသံဖိုင် )
Daw Aung San Suu Kyi Accepts Congressional Gold Aw...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ ဖိတ်စာ
ဆုလက်ခံပွဲမှ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် မိန့်ခွန်း ( RFA )...
စက်တင်ဘာလ (၂၀) ရက်နေ့ RFA မနက်ပိုင်း အသံလွှင့်အစီအစ...
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှ...
Aung San Suu Kyi's Speech at RFA
အယ်ဒီတာ ၀င်းခက်နှင့် အင်တာဗျူး ကဏ္ဍ ( ရုပ်သံ-သတင်း )...
အစိုးရတပ်များ ဆုတ်သွားသည့်တိုင် လိုင်ဇာမြို့အား စစ...
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ၏ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်...
RCSS/SSA တပ်သား ၂ဝ ဦးအား UWSA ပြန်လွှတ်ပေး
ခွင့်ပြုမိန့် မရသော်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေး လှုပ်ရှားမှု...
ဖားကန့်မြို့တွင် ယခုနှစ်အတွင်း ၁၅ ကြိမ်မြောက် ရေကြ...
သမ္မတရုံး ဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း က သူတို့ အစိုးရ အဖွဲ့...
ဖားကန့်စစ်ဗျူဟာမှူးနဲ့ KIA တပ်ရင်းမှူး တို့ကို က...
ဇေယျဝတီသူ နှင့် အင်တာဗျူး - နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကု...
မ၀င်းမော်ဦး ၂၄ နှစ်ပြည့် ဆွမ်းကျွေးတရားနာ အလှူ မိဘ...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့ အကြို ငြိမ်းချမ...
ယုံကြည်ချက်နဲ့ ကြိုးစားခဲ့တာကြောင့် ရေတာရှည်မြို့...
လေဘေး ဒုက္ခသည်များအတွက် နိုင်ငံတော်ထံ စာတင်၍ ထောင်က...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ ( ရုပ်သံ-သတင်း...
ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ် စက်မှုဇုံ(၁)ရှိ နီလာစတားစက္ကူစက...
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင်များ လျှောက်ထားမ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ ဗွီအိုအေ သီးသန့်တွေ့ဆုံ မေး...
ဖားကန့်ဒေသတွင် မေလကုန်မှ ရပ်ဆိုင်းထားသော ကျောက်စိမ...
၈၈ အရေးအခင်းတွင် ကျဆုံးခဲ့သော မ၀င်းမော်ဦး၊ မောင်သန...
၁၃၇၅ ခုနှစ်မန္တလေး သင်္ကြန်စာ (၂၀၁၃ ခုနှစ် ဧပြီလ မှ ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လွတ်လပ်တဲ့ အာရှအသံ (RFA) ရုံးချ...
စက်တင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့ RFA မနက်ပိုင်း အသံလွှင့်အစီအစ...
လာမည့်လွှတ်တော်တွင် ပြဋ္ဌာန်းရန်စဉ်းစားနေသည့် လွတ်လပ်...
မဟာရန်ကုန် မြို့ပြဖွံ့ ဖြိုးရေး မဟာဗျူဟာစီမံကိန်းအ...
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး ငါးနှစ်ပြည့်ပြီ ( ရုပ်သံ-သတ...
၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်သံဃာ့လှုပ်ရှားမှုကာလမှာ ရန်ကုန်မြို့ ...
မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် - ...
လွတ်လပ်ရေး သက်တမ်းအတွင်း ပထမဆုံး မွန်ပါတီရုံး သထုံ...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ဖားကန့်မြို့သို့ရောက်ရှိ...
ကေအိုင်အေ ခေါင်းဆောင် လဖိုင်ဇော်ဆိုင်း ပြန်လွတ်ပြီ...
မီဒီယာသမားများ တရားစွဲခံရလျှင် ဥရောပသမဂ္ဂကူညီမည်
သြစတေးလျှတွင် မီးဆင်နှာမောင်း တိုက်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၀ါရှင်တန်တွင် ကလင်တန်နှင့် တွေ့...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အမေရိကန်ခရီးစဉ် မတိုင်...
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးနေ့ နှစ်ပတ...
အခြေခံ အလုပ်သမားနဲ့ အခြေခံ လယ်ယာလုပ်သား သမဂ္ဂ အဖွဲ့...
နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးနေ့ ငါးနှစ...
နိုင်ကျဉ်းဟောင်းများအဖွဲ့မှ လွတ်မြောက်လာသော နိုင်င...
ကချင်ပြည်နယ်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးရရှိစေရန် အသနားခံစာ...
ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတမှ ၀န...
ကလေးမြို့ အကျဉ်းထောင်မှ လွတ်မြောက်လာသူ (၁၈) ဦးအနက်...
ဖွင့်လိုက်သော ထောင်ကြီးတွင် သူတို့မပါသေး
မလေးရှားကို လှေနဲ့ ခိုးသွားမည့် ဘင်္ဂလာဒေခ်ျ့ နိုင်င...
ပြစ်ဒဏ်လွတ်ငြိမ်းခွင့်ပြုလိုက်ရာတွင် ၃၉၉ ဦးမှာ နို...
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံ မှ တရားမ၀င်ခိုးဝင်လာသည့်လူ ၁၁...
စစ်တွေ အကျဉ်းထောင် မှ အကျဉ်းသား (၁၆၆) ဦး ပြန်လည်လွ...
အမိမြေငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့ မြောက်ပိုင်းကျဆုံး ကျောင...
ရခိုင် နှင့် မူဆလင် ခေါင်းဆောင်များ လူမျိုးစု နှင့...
စက်တင်ဘာလ (၁၈) ရက်နေ့ RFA မနက်ပိုင်း အသံလွှင့်အစီအစ...
နော်ဝေက ပေးသည့် အခွန် အထူးအခွင့်အရေ: အကျိုးမဖြစ်
မန္တလေး အကျဉ်းကျသံဃာများအား ဦးဝီရသူမှ ရဟန်းပြန်စည်း...
မန္တလေး အိုးဘိုထောင်မှ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား ၄၆ ဦး တရ...
တောင်ကြီးမြို့ ထင်းရှူးမြိုင် ဘုန်းကြီးကျောင်း ပြော...
ဒုတိယ ပင်လုံ ခေါ်ယူရေး တိုင်းရင်းသားညီလာခံ တောင်းဆိ...
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ၈၈ နှင့် ဖားကန့်ပြည်သူများ လက်...
တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေးအတွက် စက်တင်ဘာလ ၂၁ ရ...
စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့ ည ၁၁ နာရီ မိနစ် ၃၀ ဝန်းကျင် အခ...
အင်းစိန်ထောင်မှ ယနေ့လွတ်မြောက်သူများမှာ ဆယ်ဦးသာဖြစ...
ဒီည တောင်ငူထောင်က ၂၆ ယောက် လွတ်။ ညနေပိုင်းတွင် အင်...
ဇင်မင်းအောင် (ခ) ကင်းကြီး ပဲခူး အကျဉ်းထောင် မှ လွတ...
၅၁၄ ဦး လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ထပ်မံကြေညာ
၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ၅ နှစ်ပြည့်အခမ်းအနားကို...
စက်တင်ဘာလ (၁၇) ရက်နေ့ RFA ညပိုင်း အသံလွှင့်အစီအစဉ်
၂၀၀၂ ကျောက်ဆည်အရေးအခင်းတွင် ဖမ်းဆီးခံထား ရသောသံဃာေ...
အိုးဘိုအကျဉ်းထောင်မှ လွတ်မြောက်လာသော အကျဉ်းသားများ...
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ၏ အမေရိကန် ခရီးစဉ် မတိုင်မီ လွတ်...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီနေ့ ၂၀၁၂ ( ဓာတ်ပုံ-သတင်း...
၂၀၀၇ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ သံဃာ့အရေးအခင်းအား နှိမ်နှင်းရ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အမေရိကန်ခရီးစဉ် စတင် ( ရုပ်သံ-သ...
ရေဘေးသင့် အိမ်ခြေ ၅၀၀ ကျော်ကို အစားအစာနဲ့ အဝတ်အထည်...
ရွှေတွံတေးဆရာတော် မြစ်ဆုံတစ်နှစ်ပြည့်ပွဲ တက်ရောက်
ဦးကျော်သူ နဲ့ ဗွီအိုအေ တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း
ပေါ်တာဆွဲရာတွင် ပါဝင်သော ပါတီဝင် လူငယ်များကို ထောက်...
ခိုင်သမိုင်း ပညာရှင် ဒေါက်တာ အေးချမ်းကို ရခိုင်အမျ...
ဒုတိယမြောက် အမျိုးသမီး သံအမတ် ဒေါ်ယဉ်ယဉ်မြင့် ဖြစ်လ...
စာနယ်ဇင်းကောင်စီ(ယာယီ) ဖွဲ့စည်းလိုက် ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒုတိယ ဥ...
စက်တင်ဘာလ (၁၇) ရက်နေ့ RFA မနက်ပိုင်း အသံလွှင့်အစီအစ...
ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများ ဒီိမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌ ...
မြန်မာနိုင်ငံ စာနယ်ဇင်းကောင်စီအတွက် လျာထားရွေးချယ်...
"နိုင်ငံတော် သမ္မတဦးသိန်းစိန် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်...
သြဂုတ်လအတွင်း မှ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သော တိုက်ပွဲမျာြးေ...
အမြန်ဆုံးကျန်းမာပါစေ - နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)
ရွှေတွံတေးဆရာတော် ရခိုင်ဒုက္ခသည်များထံ သွားရောက်အားေ...
လူမှုရေးဖြင့် ရုပ်သံဖန်တီးမည် - နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန...
ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေးနေ့ (၅) နှစ်မြောက် နှစ်ပတ်လည်...
US သံရုံးများကို ထပ်မံ တိုက်ခိုက်ကြရန် အယ်လ်ကိုင်ဒ...
အမေရိကန်၏ သွင်းကုန်ပိတ်ဆို့ အရေးယူမှုမရှိသင့်တော့ ...
ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ၏ ၀န်ကြီးဟောင်း...
အမေရိကန်ဆန့်ကျင်ရေး ဆူပူအုံကြွ ဆန္ဒပြမှုများ ဖြစ်ပေ...
ကိုဂျင်မီ ၏ “လမင်းစန္ဒာ အင်းလေးကန်သာ”၀တ္ထုစာအုပ် ရော...
ခြောက်လအတွင်း တောင်သူ လယ်သမား ညီလာခံ ကျင်းပမည်
အမျိုးသားရေး လက္ခဏာ နိုင်ငံသားဖြစ်မှု ဆွေးနွေးပွဲ ရခ...
ရွှေဝါရောင် နှစ်ပတ်လည် ကျင်းပရန် ဆွေးနွေး
၄၅ နှစ်အတွင်း ပထမဆုံး အမျိုးသမီး သံတမန် ခန့်အပ်
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမေရိကန် ခရီး စတင်
ထားဝယ်အထူး စီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်း၏ မူဘောင်သဘောတူ...
၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ အဖွဲ့မှ ဂျင်မီဦးဆောင်သော ...
အရေးပေါ်လူနာ ကုသ ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း ၂၄ နာရီ ဝန်ဆေ...
မြန်မာငွေပေးကတ် ကွန်ရက် တရုတ်၊ ဂျပန်သို့ ချိတ်ဆက်
စက်တင်ဘာလ (၁၅) ရက်နေ့ RFA ညပိုင်း အသံလွှင့်အစီအစဉ်
ကြံ့ခိုင်ရေး ကိုယ်စားလှယ် ဖယ်ရှားရေး လက်မှတ်ထိုးေ...
မန္တလေးမြို့တွင် ဒီမိုကရေစီနေ့အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် မီးပ...
ပုဂ္ဂလိကလုပ်ငန်းများ အခြေကျသွားလျှင် အာမခံကဏ္ဍသို့ နု...
ယမ်းနံ့တွေ နဲ့ မွန်းကျပ်နေဆဲ ဖားကန့်
ရွှေဝါရောင် နှစ်ပတ်လည်နေ့ ကျင်းပမည်
ကိုမိုးသီးဇွန် နှင့်အဖွဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးသိ...
“ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ထားသဖြင့် ပစ်ခွင့်ရှိနေသည့် နေပြည်...
ပြည်သူလက်မခံသော စီမံကိန်းများ ဘယ်တော့မှ အောင်မြင်မ...
“ ကချင် စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအတွက် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်း...
မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံအပြား နိုင်ငံတကာ ငြိမ်းချမ်းရေ...
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ၁၄ မြို့နယ် သုံးရက်ကြာ ဂျိုးဖြူေ...
တရားစွဲခံ ရသေ့တောင်မှ လယ်သမား ၄၅ ဦး အမူ ယခုလတွင် ထ...
ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားကို အောင်မြင်စွာရုတ်သိမ်းခဲ...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ ၂၀၁၂ အထိမ်းအမှတ်နေ့...
လယ်ယာမြေကိစ္စ တိုင်ကြားရန်ပုံစံ ၊ မြေလွတ်မြေလပ်များ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် တွေ့ဆုံပွဲ ကျင်းပမည့် နေရ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ ၁၇ ရက်ကြာမြင့်မည့် အမေရိက ခရီ...
မန္တလေး ကျူးကျော်များ သတ်မှတ်ရက်ပြည့်ပါက ဖယ်ရှားရှင...
သာပေါင်းမြို့နယ် ကျေးရွာအချို့ရှိ ကလေးငယ် ၁၀၀ ကျော...
ဖားကန့်မြို့ပေါ်ရှိ ဒုက္ခသည်စခန်းများသို့ လုံခြုံရေး...
လက်နှက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ဖားကန့်တွင် ကျောင်...
ကလေးတွင် ဘင်္ဂါလီ ၁၀ ဦးနှင့် မြန်မာ တစ်ဦး တရားမဝင် ခ...
ကြေးနီစီမံကိန်း ရပ်တံ့ဖို့ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့...
ကချင်စစ်ပြေး ဒုက္ခသည်နဲ့ မေးမြန်းချက်
ထပ်ပြောရဦးမယ်…. အဘစိန်ရေ - နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန...
ထိုင်းရှိ မြန်မာ ဒုက္ခသည် တစ်သိန်းကျော် တစ်နှစ်အတွင...
အွန်လိုင်း ဘဏ်စနစ်နှင့် လုံခြုံရေး ကဒ်များ ပြုလုပ်...
မီဒီယာ ဥပဒေသစ် စာနယ်ဇင်း ကောင်စီ ရေးဆွဲမည်
KKO ဥက္ကဌ မန်းရောဘတ်ဘဇန် ၏ ရှင်းလင်းချက် (ရုပ်သံ)
ရွှေတွံတေးဆရာတော် မအူပင်မြို့လေးအိမ်စုတွင် SKYNET...
ကလေးမြို့၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတ ထောက်ခံပွဲ အောင်မြင်
ကျောက်တော် ဦးကျော်မောင်ချေ (အသက် ၆၄ နှစ်) ၏ ဈာပန ...
ဦးတေဇပိုင် ထူးကုမ္ပဏီ မှ ထုတ်ဝေသော ဧရာဝတီဂျာနယ် အယ်...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ပထမဆုံး လွှတ်တော် ဂျာနယ် စတင်ထွက်...
KIO နဲ့ နေပြည်တော်မှာ ဆွေးနွေးဖို့ သမ္မတ ဖိတ်ခေါ်
ဒေသခံ မူဆလင်ခေါင်းဆောင် တစ်ဦးက ရိုဟင်ဂျာအစား တိကျေ...
“ ကျောက်ဖြူ-ကူမင်းရေနံ နှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့ပိုက်လိုင...
ထားဝယ်အထူးစီးပွားရေးဇုန် စီမံကိန်းမှ Max Myanmar C...
သက်ကြီးရွယ်အို ရပိုင်ခွင့်ဆိုင်ရာ တောင်းဆိုသည့် လှု...
အာရှစိမ်းလန်းမှုဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ် လီမိတက်၏ ATM စက်မျာ...
“မုံရွာ လက်ပံတန်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း အဖမ်းခံရသူ ...
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ငွေစက္ကူအစား MPU ကဒ်များဖြင့် အစာ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် နှင့် ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေ...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ထံ နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖ...
နေပြည်တော် ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်ရှိ လယ်သမား ၁၂၅ ဦးအား ...
ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ဒုက္ခသည်ဆိုင်ရာမူဝါဒဟာ ဒုက္ခသည်တွေအ...
ရိုဟင်ဂျာ ဟု မသုံးနှုန်းရန် ရခိုင် သတင်းစာ ဆရာအသင်း...
နော်ဝေ မီဒီယာအထိ သတင်းကြီးတဲ့ ရွှေမင်းသမီး
ဒေးဒရဲမြို့နယ် ဗကသများ အဖွဲ့ချုပ် ဖွဲ့စည်း
စေ့စပ်ဆဲ ကာလမှာပင် သဘောထား ကွဲလွဲနေသည့် ပုသိမ် NLD...
မေးခွန်းပေါင်း ၁၀၀ ကျော်ကို ဖြေကြားမယ့် ရခိုင် လွှတ...
နိုင်ငံပိုင် လယ်မြေကျူးကျော်မှုဖြင့် ရွာသား ၁၂၅ ဦး...
စက်တင်ဘာလ (၁၃) ရက်နေ့ RFA မနက်ပိုင်း အသံလွှင့်အစီအစ...
ရခိုင်ပြည်အတွင်း စုံစမ်းလေ့လာခဲ့သော ကန်ဝန်ကြီး Jos...
Jammatul Arakan (JMB) အကြမ်းဖက် ၄ ဦးကို ထပ်မံရုံးရ...
၀က်မှေးရွာသူများ ထိန်းသိမ်းခံထားရမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီ...
မန္တလေးပြည်သူ့ဆေးရုံကြီး အသည်းပါရဂူ ဒေါက်တာ ဒေါ်ညိုမ...
မုံရွာခရိုင်၊ ဆားလင်းကြီးမြို့နယ်၊ လက်ပန်းတောင်းတေ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ၏ အမေရိက ခရီးစဉ် စက်တင်ဘာလ ၁၆ ရ...
ရွှေတွံတေး ဆရာတော် မှ ဦးဝင်းတင်ဖောင်ဒေးရှင်း ကို ကျ...
ကျူးကျော် နေထိုင်နေကြတဲ့ နာဂစ် ဒုက္ခသည်တွေကို ဖယ်ရှ...
စွမ်းအင် နှင့် သတ္တုကဏ္ဍ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရေး ကမ္ဘာ...
မန္တလေး အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်အား လေကြောင်း ကုန်စည်...
၈၈မျိုးဆက်ကျောင်းသားများဖြစ်သော ကိုဂျင်မီ၊ ကိုကြို...
ရဲဘက် စခန်းများ ရပ်ဆိုင်းရန် သမ္မတ ကို တင်ပြမည်ဟုဆိ...
ခွင့်ပြုမိန့် မယူဘဲ ဟောပြောသဖြင့် ပွင့်လင်း လူ့ဘော...
ရေချို ပုစွန်များတွင် ဆပ်ပြာရည် ပါသည် ဆိုပြီး တရုတ...
ဧရာဝတီတိုင်း ကျောင်းကုန်း ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေအတွက် ...
နယူးယောက်မြို့တော် မြန်မာကွန်မြူနီတီမှ ဒေါ်အောင်ဆန်...
Western Union နှင့် Myanmar Oriental Bank သဘောတူညီ...
မုံရွာမြို့ အခြေအနေ နောက်ဆုံးရသတင်း
ရခိုင်ပါတီ နှစ်ခု ပါတီတစ်ခုတည်းအဖြစ် ပူးပေါင်းရန်ေ...
စက်တင်ဘာလ ၁၂ ရက် RFA မနက်ပိုင်း အသံလွှင့်အစီအစဉ်
DVB သတင်းထောက် နှင့် ကျောင်းသားမိဘ အမှု စတင်ကြားနာ
မြန်မာ-ထိုင်းနယ်စပ် ဒုက္ခသည် စခန်း ထောက်ပံ့နေသည့် T...
ကမာရွတ်မြို့နယ်အတွင်း အိမ်ဖော် မိန်းကလေး သေဆုံးမှုအ...
ယာယီ သတ်မှတ်ပေးထားသော အခြေခံလစာနှုန်းထားဖြင့် စက်ရု...
မန္တလေးတွင် ချိုချဉ်စက်ရုံလုပ်သားများ ဆန္ဒပြနေ(ဓာတ်ပ...
သြဂုတ်လ ၃၁ ရက်နေ့ထုတ် မော်ဒန် သတင်း ဂျာနယ်ပါ ‘ကေအမ...
ရေမြှုပ်အကျဉ်းသား - နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားဟောင်းများ သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ...
သမ္မတကြီး ထောက်ခံ ဆန္ဒ ဖော်ထုတ်ပွဲ ကလေးမြို့တွင် ကျင...
ရခိုင်ဒေသ ထောက်ပံ့ရေး အခြေအနေ စိုးရိမ်ဖွယ် ရှိဟု အ...
ကလိုထူးဘော​ကရင်အစည်းအ​ရုံး(KKO) နှင့်ပတ်သက်​၍ နာယက...
ယုဇနကုမ္ပဏီက တရားစွဲဆိုထားသူများ၏ မြေဧက(၁၀၀၀)နီးပါး...
စစ်တွေတက္ကသိုလ် ဆရာ၊ဆရာမများ လစာဖြတ်တောက် ခြင်း ကိစ...
ကျပ် ၅၀၀၀ တန်ငွေစက္ကူ အတုပြသနာများမှာ နယ်စပ်ဒေသများ...
မုံရွာမြို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြေးရုပ်အနီးရှိ အမှတ် ၁ ရဲ စ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးအတွက် ခြေလှ...
ရေဘေးသင့် ပြည်သူတွေအတွက် ပန်းရဲ့လမ်းအဖွဲ့ ကြိုးစား...
ကချင်ဒေသ ငြိမ်းချမ်းရေး စကားဝိုင်း (၁+၂) ရုပ်သံ-သတ...
“ ရိုဟင်ဂျာ” စကားလုံးသုံးနှုန်း၍ သတင်းရေးသားခြင်းအာ...
မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ် အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်၍ အ...
ဘာသာပေါင်းစုံ တက်ရောက်တဲ့ အီဒ် မိတ်ဆုံစားပွဲ ( ရုပ...
ယနေ့ နေပြည်တော် သမ္မတအိမ်တော်တွင် ကျင်းပသော ပြည်ထော...
စက်တင်ဘာလ ၁၀ ရက် RFA ညပိုင်းအသံလွှင့်အစီအစဉ်
အထည်ချုပ် လုပ်ငန်းများ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီး မြှပ်န...
ကိုရီးယား လေကြောင်းလိုင်း ရန်ကုန် သို့စက်တင်ဘာ ၁၃ ...
၃၈ လမ်း ရှစ်လွှာ တိုက်ခန်း မီးလောင်၊ အသက်ရှစ်ဆယ်ခန်...
အစ္စလာမ် အထိမ်းအမှတ် အီးဒ် မိတ်ဆုံပွဲသို့ ဘာသာကြီး ...
ရန်ကုန် တွင် ဟိုတယ်သစ် လေးလုံး အခန်းပေါင်း ၁၀၀၀ ကေ...
ဘူဂေးရီးယား မှ လေယာဉ်သစ်များ ရောက်ရှိ
မြန်မာ စတော့ရှယ်ယာ ဈေးကွက် ၂ နှစ်အတွင်း အကောင်အထည်...
ဦးဥတ္တမနေ့ ကျင်းပခွင့်ရ ( ရုပ်သံ-သတင်း
မုံရွာမြို့ဆုတောင်ပြည့် ဘုရားပေါ်သို့ တက်ရောက်ပြီး ...
စက်တင်ဘာလ (၁၀) ရက်နေ့ RFA မနက်ပိုင်း အသံလွှင့်အစီအစ...
ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နှင့် မြန်မာ နှစ်ဖက်လူဦးရေ သိပ်သည်းမှု...
(၇၃) ကြိမ်မြောက် ဆရာတော် ဦးဥတ္တမနေ့ အခမ်းအနား
၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်းသားများ “Unity” ဂျာနယ်ကို အမှား...
လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်ဆောင်ဆန်းစုကြည် နှင် အမေရိကန် န...
သမိုင်း က မအ သလို ပြည်သူတွေကလဲ ငန မဟုတ်ပါဘူး ( သတင...
“ မြန်မာနိုင်ငံတွင်ပထမဦးဆုံး ထူးခြားသည့်အလှူအဖြစ်ပ...
စစ်တွေမြို့တွင် ဆရာတော် ဦးဥတ္တမ နေ့ အခမ်းအနား ကို လ...
ယနေ့မွန်းလွဲ ၁၂ နာရီကျော်ခန့်က အလုံမြို့နယ်အတွင်း ...
ABSDF မြောက်ပိုင်း သတ်ဖြတ်မှုများအား လူထုဆန္ဒမဲကောက်...
ရန်ကုန်ကွန် ပျူတာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂမှ နု...
"ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ြ...
ဖုန်း ဆင်းကဒ်တွေ ဈေးသက်သာဖို့”ရွှေပြည်တံခွန်”ကုမ္ပဏ...
ဒီနိုင်ငံမှာ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမရှိဘူးလို့ ကျွန်မ...
အုပ်ချုပ်ရေး နှင့် မည်သည့် ပြဿနာမျှ မရှိဟု သူရ ဦးေ...
ပဋိပက္ခကြောင့် သေဆုံးခဲ့သူများကို ဂုဏ်ထူးဆောင်ဆုချီ...
တရား ဥပဒေ စိုးမိုးရေး တရားရုံး သုံးခုကို ဒေါ်အောင်ဆ...
KNU နှင့် အစိုးရ ၏ သတင်းစာရှင်းပွဲ အပြည့်အစုံ။ (KI...
ရွှေလောင်းမြို့တွင် “သျှင်ဗာကူလ”ပရဟိတအခမဲ့ ဆေးကုခန်...
စက်လေးပါး နှင့် လွန်ဆွဲသောအခါ
၅၀၀၀ တန် ဖုန်းဂယက် လူတန်းစားပေါင်းစုံ ရိုက်ခတ် ( ရ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် Kentucky, Louisville မြို့သို့...
KIO/KIA နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေး တည်ဆောက်နိုင်မည် ဆိုပ...
လှည့်ကင်းရဲ အဖွဲ့၏ ထိန်းသိမ်း ခံရသူ လူငယ်တစ်ဦး ဦးေ...
ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီးသစ်များ ကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆို
ရဲဘော် သုံးကျိပ်ဝင် ဗိုလ်မှူးချုပ် ကျော်ဇော မြန်မာ...
ကျူးကျော် နေသူများကို အင်အားသုံး ရှင်းမည်ဟု စည်ပင်...
ABSDF ရဲ့ အမှန်တရားနဲ့ တရားမျှတမှု ဖော်ထုတ်ရေး
တနင်္သာရီ ကမ်းရိုးတန်းတွင် နိုင်ငံတကာ ရေနက်ဆိပ်ကမ်းသ...
ကေအိုင်အေ အဖွဲ့အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးမှုပြု...
လက်ပန်းတောင်းတောင် မပျောက်ပျက်ရန် မုံရွာဒေသခံ များ...
ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးပွဲများတွင် တိုင်းရင်းသားရေ...
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး အစိုးရအဖွဲ့ရုံးသို့ လာဘ်ပေးလာဘ်...
ဒေါနတောင်ပေါ်လမ်း ချောက်ကမ်းပါး လမ်းနှုတ်ခမ်းသားပြို...
မန္တလေး-မြစ်ကြီးနား ရထားလမ်းပိုင်း ဗုံးထိမှန်၍ ပျက်...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကော့မှူးခရီးစဉ် (စက်တင်ဘာ ၇) မှ...
တွံတေး NLD ဆန္ဒပြ ( ရုပ်သံ-သတင်း )
မြေယာသိမ်းတိုက်ပွဲ ကြေးနီတောင်မှာ ဆင်နွှဲ ( ရုပ်သံ-...
မာစတာကဒ် ပရိုမိုးရှင်းကာလအား ဘဏ်ဝန်ထမ်းများဖြင့် စ...
ဖားကန့် လုံးခင်းကျေးရွာရှိ ရပ်ဆိုင်း ကျောက်ကုမ္ပဏီမ...
ယနေ့ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် န...
ဘာမြူဒါ သို့ လက်စလီ မုန်းတိုင်း ဖြတ်သန်းတိုက်ခတ်မည...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး အသစ်များ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ၌ ...
ယနေ့ (စက်တင်ဘာလ ၇ရက်နေ့) တွင် ကျင်းပမည့် ပြည်ထောင်...
နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး/ပြည...
လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန် (၄) SMK အထည်ချုပ်စက်ရုံမှ အလုပ်...
မြစ်ဆုံစီမံကိန်း ရပ်ဆိုင်းခြင်း တစ်နှစ်ပြည့် အခမ်း...
ငြိမ်းချမ်းရေး လုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း ဒေသခံများ ပါဝင်နု...
နိုင်ငံတော် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေခုံရုံးဥက္ကဌနှင့...
မြိတ်ရှော့ပင်း စင်တာတွင် ကာစီနို လောင်းကစား ၀ိုင်း...
နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး နှင့် တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန်ြ...
နိုင်ငံရေး အကျဉ်းသားများရဲ့”ရွှေအိုး” ( ရုပ်သံ-သတင်...
ပြည်တော်ပြန် ဦးမိုးသီးဇွန်တို့ ရဲ့သတင်းစာ ရှင်းလင်...
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ဂျပန်သံရုံးမှ Counsellor ဖြစ်သူ Mr...
အစိုးရ တပ်တည်နေရာ သုံးပုံ တပုံနီးပါး ရွှေ့ပေးရန် KN...
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဒီမိုကရေစီနေ့ အခမ်းအနားကို လွှတ်တေ...
ABSDF ပါဂျောင်ကိစ္စ တရားရင်ဆိုင်သင့်သည့် အချိန်အား ...
၀၆-၀၉-၂၀၁၂ ရက်နေ့ လွှတ်တော်တွင်းမှ သတင်းများ စုစည်း...
တွံ့တေးမြို့နယ် ရပ်ကျေး NLDပါတီဝင်များ ဆန္ဒထုတ်ဖော်...
မန္တလေးအခြေစိုက် ဓာတ်ပုံမဂ္ဂဇင်း မကြာမီထွက်ရှိမည်။
ကရင် စာပေ နှင့် ယဉ်ကျေးမှုအသင်း (ဆီယက်တဲလ်) ဦးစီးတဲ...
ပါတီတွင်း မကျေလည်မှု တွံ့တေး NLD ဆန္ဒပြ
မြန်မာအစိုးရ နဲ့ KNU ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး အကြာ...
ပြည်တော်ပြန် ABSDF ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများ နှင့် ဒီမ...
လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်းအတွက် မြေသိမ်းခံကျေးရွာ ...
မကွေး-ရေနံချောင်း လက်မ ၂၀ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်းစ...
သိမ်းဆည်းခံ လယ်သမားများအတွက် ရပိုင်ခွင့် အခွင်းအရေ...
ခုံရုံးသည် အခြေခံဥပဒေအား မခန့်လေးစား လုပ်နေကြောင်း...
စမ်းချောင်း NLD ရေဘေး အလှူ ( ရုပ်သံ-သတင်း )
လူမှုကူညီ စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ “ရွှေအိုး”
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ရုံးခန်းသစ် ဖွင့်ခြ...
ရေကန်နဲ့ ရေအိမ် ရုပ်သံ-သတင်း ( ရုပ်သံ-သတင်း )
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တောင်အာဖရိက ဝန်ကြီးနဲ့ တွေ့ဆုံ ...
ရခိုင်ပြည်နယ် အရေးကိစ္စ နဲ့ ပတ်သက်လို့ သမ္မတ ဦးသိန်...
သိမ်းယူသွားတဲ့ လယ်မြေအတွက် နစ်နာကြေးပေးဖို့ လယ်သမာ...
ဘာ့ကြောင့် နည်းပညာ ဖြန့်ဖြူးရေး ခရီးစဉ်ကို စီစဉ်ရသ...
ဟားခါးမြို့ပေါ်တွင် ကားတိမ်းမှောက်၊ နှစ်ဦးသေ၊ ၁၀ ဦး...
၂၀၁၄ သန်းခေါင်စာရင်းအတွက် ပထမအဆင့်လုပ်ငန်းစတင်
ABSDF ဥက္ကဌ ဟောင်းဦးထွန်းအောင်ကျော် နဲ့မေးမြန်းချက်...
ကချင်စစ်ပြေးဒုက္ခသည် ရေဘေး နှင့် ရင်ဆိုင်နေရ
နိုင်ငံတော် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် တိုင်းရင်းသားရေးရာ ဝန...
ဒယ်အိုးဆရာတော် က ရခိုင်ပြဿနာ မှာ နိုင်ငံတော် လုံခြ...
ငွေတစ်သောင်းနဲ့ လေကြောင်းလိုင်း ပိုင်ရှင်ဖြစ်နိုင်...
တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း နေရာရရေးထက် ဒီမိုကရေစီခိုင်မာရေး...
ယနေ့ (စက်တင်ဘာလ ၅ ရက်နေ့) တွင် ကျင်းပမည့် အမျိုးသာ...
ခုံရုံးဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့ဝင် အမျိုးသားဒ...
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ ထံသို့ ရောက်ရ...
“ရေပြာချောင်း အတွင်း စက်လှေတိမ်းမှောက်မှုကြောင့် တစ...
တနိုင်ငံလုံးရှိ ကျောင်းသား သမဂ္ဂများ နှင့် လက်တွဲရန...
မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အမေရိကန် သံအမတ်ကြီး ရခိုင်သွာ...
ABSDF ကျောင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ ပထမ အကြိမ်ဥက္ကဋ္ဌ န...
တောင်တွင်းကြီး ဘောလုံးပွဲ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွါးမှု ယနေ့ ...
ယနေ့ ညနေ တောင်အာဖရိကနိုင်ငံ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်ဆံေ...
နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံးမှ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကထံသ...
ရွာနေရာ မပြောင်းလိုသော ကလုံထကျေးရွာ အီတာလျံထိုင်း ...
နှစ်ဖက် လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်ကို မြန်မာ အစိုးရ နှင...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်များန...
နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများ လုပ်ငန်းကော်မတီ အလုပ...
ကိုမင်းကိုနိုင်နှင့် မစုစုနွေးကို John Humphery Aw...
စာရေးဆရာ ၊ ကဗျာဆရာ ငြိမ်းချမ်းရေးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ် ထင်...
မြောင်းမြဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုအတွက် ဒီချုပ် ဗဟိုမှ ကြေညာချ...
၀၄-၀၉-၂၀၁၂ လွှတ်တော်တွင်းမှ သတင်းများ စုစည်းဖေါ်ပြခြ...
ခုံရုံး ၏ ကန့်ကွတ်မှု ကို လက်ခံ စဉ်းစားပေးတော့မည် မ...
ကဗျာရှည် ရွတ်ဖတ်ခြင်း ( ရုပ်သံ--သတင်း )
တကသ အဆောက်အအုံ ပြန်လည်တည်ဆောက်ရေး ( ရုပ်သံ--သတင်း ...
ထိန်လင်းဆေးခန်းသို့ လေ့လာမှု - နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်...
လျှို့ဝှက်ချက်တွေ နဲ့သူ
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နှင့် Trade Minister Of Canada ...
ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး (KNU)တို့ ကရင်ပြည်နယ် ဘားအ...
ူပူ အကြမ်းဖက်မှု ဖြစ်ပွားရာ ရခိုင်ဒေသ ၄ ခုနှင့် ရွှေ...
ပြည်ထောင်စု စာရင်းစစ်ချုပ် နှင့် ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီး...
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားများ ရုးခန်းတွင် ပြသနာပေါင်းစ...
မန္တလေးမြို့တွင် နိုင်ငံတော် သမ္မတ အား ထောက်ခံသည့် ဆ...
“ရာဟုလာ” ဓမ္မသင်တန်းကျောင်းတွင် တည်ဆောက်ဆဲ အဆောက်အဦ...
ညီနေမင်း(နည်းပညာ) ၏ မြန်မာပြည် နယ်လှည့်ပြီး ၃ လကြာ...
ဒုတိယ အကြီးဆုံး ဂီတ ရန်ပုံငွေပွဲ ( ရုပ်သံ-သတင်း )
အရွယ်မရောက်သေးသူ ကလေးသူငယ်များ စစ်မှုထမ်းဆောင်ခြင်း...
KNU နှင့် အစိုးရ ငြိမ်းချမ်းရေးကိုယ်စားလှယ်များ တတ...
"ဦးအောင်သိန်းလင်း တင်သွင်းသော အဆိုကို ဒီချုပ် ၊တပ်...
ယနေ့ (စက်တင်ဘာလ ၃ရက်) တွင် ကျင်းပမည့် အမျိုးသားလွှတ...
စုံစမ်း စစ်ဆေးရေးအဖွဲ့၊ ဥက္ကဋ္ဌ နှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား...
နိုင်ငံတော် သမ္မတအား ထောက်ခံသည့် ဆန္ဒဖော်ထုတ်မှု ခွင့...
သိသင့်သိထိုက်တဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံ ၏ အလုပ်သမား ဥပဒေ....
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးအောင်ကြ...
သမ္မတ ထံစာတင်သည့် ဆင်ပေါင်ဝဲ တောင်သူများအား စစ်တပ်က...
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ စာအုပ်အား လက်ပွေ့ရောင်းချလာသ...
မန္တလေး ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲ ပြုလုပ်မည့် လမ်းကြောင်းမြေပံ...
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးသစ် ဦးအောင...
ပြည်ပ အတိုက် အခံများ အစိုးရပေါ် ယုံကြည်မှု တိုးလာ ဟု...
နတ်မောက်မြင်းတဲကြီးရွာ ဆွမ်းသွပ်တရားနာပွဲအမဲသားေ...
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ နှင့် ရုပ်ရှင်၊ဗီဒီယို လောက...
ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာအတွက် နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး၏ ရပ်တည်ခ...
င်္ဂါလီ အရေး နှင့် ပတ်သက်၍ နိုင်ငံတော် သမ္မတကြီး အားေ...
လှိုင်သာယာမြို့နယ် အတွင်းရှိ စက်ရုံ ၃၀ ခန့်မှ လုပ်သ...
သမ္မတရုံး ဝန်ကြီး နှစ်ဦး နှင့် ABSDF ဗဟိုဥက္ကဌဟောင်...
တိုင်းရင်းသား ပြည်သူတရပ်လုံး အထူးသတိထားရမဲ့ အချိန်...
ထိုင်းဝန်ကြီးချုပ် မြန်မာသို့ လာရောက်ရေး မီးစိမ်းေ...
ဂစ်တာလေလံပွဲတွင် Sky Netမှ ငွေကျပ်၅၈၈သိန်းဖြင့် လေ...
စေတနာဝသန် ဂီတဖျော်ဖြေပွဲတွင် ကဗျာရှည် ရွတ်ဖတ်ခြင်း...
၈၈ မျိုးဆက် ဂီတရန်ပုံငွေပွဲ အတိုက်အခံနှင့် အစိုးရ၀...
စေတနာဝသန် ဂီတဖျော်ဖြေပွဲသို့ ကိုမိုးသီးဇွန်၊ ကိုထွ...
စေတနာဝသန် ဂီတဖျော်ဖြေပွဲ စတင်
သမ္မတထံစာတင်သည့် ဆင်ပေါင်ဝဲတောင်သူများအား စစ်တပ်ကေ...
ဇွန်လ အရေးအခင်းတွင် ကျဆုံးသွားသော အာဇာနည်သူရဲကောင်...
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်ဆိုင်ရာ အစည်းအဝေး ပုဂံတွင် ကျင...
Save The Children အဖွဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို လာရေ...
H.R & Law (Australia) အဖွဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ အောင်ဆန်းစုကြည် ကမ္ဘာ့လွတ်လပ...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ယခင် နိုင်...
NED အတွက် ဦးကျော်သူ ၏ ပြည်ပခရီး
၃၁ နှစ်တဲ့ဗျာ - နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်)
မကွေးမြို့ အမှတ် (၁) ရဲစခန်းတွင် အမှုဖွင့်ထားသော DV...
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် စက်တင်ဘာ (၁)ရက် နံနက် ၁၀ နာရ...